Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Window Registry » Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks]
1 Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 1:39 pm
အောက်မှာပါတဲ့ဟာ အကုန်လုံးကို Notepad နဲ့ကူးပါ RegisryTool.vbs ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ သိမ်းပြီး Run ကြည့်ပါ။
enable registry ကို disable registry ။။ disable registry ကို enable registry လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
2 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 1:48 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] မှာတင်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို လိုက်နာပေးပါ။
3 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 1:58 pm
အဲဒါဆို ဟန်ကျတာပေါ့.. [You must be registered and logged in to see this image.]
မသွားပီဗျို့........[You must be registered and logged in to see this image.]
4 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 1:59 pm
type in Run dialog box >
Vius ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ Registry Editor ကို လိုသလို enable-disable လုပ်နိုင်ပါတယ်။
5 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 2:09 pm
ဖိုရမျ အကြိုးဆောငျ ရမှတျ : 46
အေးဗျာ မိုက်တယ် ကိုကျော်ရေ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် . . . .
အဲဒါမျိုးလေးတွေများများသာတင်ဗျာ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 2:10 pm
ထက်နိုင် wrote: [You must be registered and logged in to see this link.] မှာတင်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို လိုက်နာပေးပါ။
ဘယ်စည်းကမ်းချက်နဲ့ ငြိလို့လဲ ဖိုရမ်ရဲ့ စည်းကမ်းချက်နဲ့ ငြိရင်လည်း ဘယ်အချက်နဲ့ငြိလဲဆိုတာ ပြောပါ။
နောင်ပြင်ရမယ်ဆိုလည်းပြင်မယ်လေ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မပါဘဲနဲ့လည်း သတိပေးချက်ကြီး အနောက်ကနေလိုက်နေရင် မကောင်းဘူးနော်။
7 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 2:28 pm
ကိုကျော်စွာသန့် က Registry ကိုတော်တော် ပိုင်တာဘဲနော် [You must be registered and logged in to see this image.]
8 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 2:31 pm
post တွေတင်တဲ့ အခါမှာ Topic Title ရဲ့ ဘေးမှာ "" ဆိုပြီး tag တွေထည့်ပေးပါဆိုတာပါ။ အကို မသိသေးဘူးနဲ့ တူတယ်။
ဒီပို့ စ်ကိုတော့ ထည့်ပြီးသွားပါပြီ။
9 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 2:51 pm
မသိဘူးအဲ့ဒါတော့ အမှန်တကယ်မသိဘူး ဖိုရမ်ကို လာဖတ်တာဘဲများတယ် တင်ဖို့ အကြောင်းအရာကလည်း မရှိတော့ ရှိတဲ့အချိန် အရင်လိုဘဲ တင်လိုက်မိတာ
စိတ်ထဲမှာ တင်ချင်တဲ့ဇောတစ်ခုဘဲရှိတာ မြန်မြန်ရေးမြန်မြန်တင်ရတာ
ဒီမှာ ကော်နက်ရှင်ကမကောင်းဘူး အမ်ပီတီကဒေါင်းနေတယ် ဝိုင်မက်စ်က ဝိုင်းသုံးတော့
မကောင်းတဲ့ကြားကတင်ပေးလိုက်တာ အခုရက်ပိုင်း ကိုက်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို
10 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 8th May 2010, 2:54 pm
အဲဒီလို ပြေပြေ လည်လည် လေးရှိတော့ Forum အတွက်ကောင်းတာပေါ့ ဗျာ..ဟီး [You must be registered and logged in to see this image.]
11 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 9th May 2010, 1:47 pm
အကူအညီတောင်းချင်လို့ဗျာ ကျွန်တော်လည်း hardware problem ထဲမှာရေးတော့ရေးထားတယ်
ကိုကျော်စွာသန့်ကို ကူညီနိုင်မယ်ထင်လို့ပါ..problem ဖြစ်နေတာက. . . .
ပြန်နေတယ်ဗျာ ကွန်နက်ရင်တော့သုံးလို့ရတယ် . . ဒါပေမယ့် share print တို့
share file တို့ကိုခေါ်မရတော့ဘူး
lan driver ကိုလည်း
ပြန်ဖြုတ်ပြီးပြန်တင်ပီးသွားပီ. .lan ကြိုးကိုလည်းပြောင်းသုံးပီးသွားပီ.
.အစဉ်မပြေဘူးဗျာ . . .ဘယ်လိုလုပ်ရင်
12 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 11th May 2010, 11:50 am
ဂွတ်တယ် ကိုကျော်ဇွာသန့် ရေ.
Hardware Problem တော့ ဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဗျ
ကျနော်ထင်တာတော့.. နာမည်များမှားနေသလားလို့ 
Computer IP or Computer name တစ်ခုခုမှားနေသလားလို့ 
အရင်ဆုံး Ping လုပ်ကြည့်လေ
Stat>Run>cmd>ping server or server IP ပေါ့
Services တွေ ပိတ်နေလို့ ဖြစ်မယ်ဗျ
13 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 16th July 2010, 5:27 am
အကိုရေ ညီလေးတခုတင်ပေးလိုက်မယ်နော် .vbs ဖိုင်လေးကို
တင်ပေးလိုက်ပါတယ် နော် regestry ကို လိုသလို
အောက်က ဖိုင်လေးကို ကုတ်တွေ ကို .vbs နဲ့ save ပီးတော့ သုံးကြည့်ပါ
[b]'Enable/Disable Registry Editing tools
'© Mudit Goyal - rev 20/07/08
set WSHShell = CreateObject("Shell.Application")
p = "HKCU\_Software\_Microsoft\_Windows\_CurrentVersion\_Policies\_System"
အဲတာတွေ လုပ်ရမှာ မလုပ်ချင်ဘူး အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင် အောက်ကဖိူင်လေးကို ဒေါင်းပီး သုံးလိုက်ပါ
14 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks] on 16th July 2010, 7:41 pm
Code တွေနဲ့ လင့်တွေကို
ဖိုရမ်မှာစည်းကမ်းချက်အတိုင်း တင်ပေးပါ ခင်ဗျာ
15 Re: Enable & Disable Registry Editor [Tips & Tricks]